Jobready365 | Online Job Portal
--- Choose Job Category --- Accounting/Tax (စာရင်းအင်းနှင့်အခွန်) Administrative (အုပ်ချုပ်ရေး) Banking & Finance (ဘဏ်နှင့်ဘဏ္႑ာရေး) Basic Construction Worker (အခြေခံဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားများ) Beauty & Wellness/Health & Fitness (ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပ) Building Materials & Construction (ဆောက်လုပ်ရေး) Business Development (စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ) Consulting (အကြံပေး) Customer Service (ဧည့်၀န်ဆောင်မှု) Design (ဒီဇိုင်း) Driver/Security/Cleaning (ယာဉ်မောင်း/လုံခြုံရေး/သန့်ရှင်းရေး) Education & Training (ပညာရေးနှင့်သင်တန်းများ) Engineering (နယ်ပယ်အသီးသီးမှ အင်ဂျင်နီယာများ) General Worker (အထွေထွေလုပ်သား) Hospitality / Food & Beverage (အစားအသောက်ဆိုင်ရာဧည့်၀န်ဆောင်မှု) HR/Training and Recruitment Information & Technology Insurance (အာမခံ) Legal (ဥပဒေရေးရာ) Logistics/Distribution (ဖြန့်ချိရေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေး) Maintenance / Repair (နယ်ပယ်အသီးသီးမှပြုပြင်ရေး) Management (စီမံခန့်ခွဲမှု) Manufacturing (ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း) Marketing / Public Relation (ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး နှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး) Media & Advertising (သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကြော်ငြာ) Medical Services (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၀န်ဆောင်မှု) Merchandising & Purchasing (ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအ၀ယ်) Others (အခြား) Pet Care (အိမ်မွေးတိရိစၦာန် ပြုစုရေး) Professional Services Project Management Property (အိမ်ခြံမြေ) Public Sector / Government / Civil Service Research and Development (ဈေးကွက်သုတေသန) Sales (အရောင်း) Sciences / Laboratory / Radiation (ဓါတ်မှန်/ဓါတ်ခွဲခန်း) Strategy/Planning Telecommunication (ဆက်သွယ်ရေး) Tourism Service (ခရီးသွား၀န်ဆောင်မှု)
--- Choose City --- Ayeyarwaddy (ဧရာ၀တီတိုင်း) Bago (ပဲခူးတိုင်း) Chin (ချင်းပြည်နယ်) Kachin (ကချင်ပြည်နယ်) Kayah (ကယားပြည်နယ်) Kayin (ကရင်ပြည်နယ်) Magway (မကွေးတိုင်း) Mandalay (မန္တလေးတိုင်း) Mon (မွန်ပြည်နယ်) Nay Pyi Taw (နေပြည်တော်) Rakhine (ရခိုင်ပြည်နယ်) Sagaing (စစ်ကိုင်းတိုင်း) Shan(ရှမ်းပြည်နယ်) Tanintharyi (တနင်္သာရီတိုင်း) Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)
--- Choose City First --- Ahlone (အလုံ) Bahan (ဗဟန်း) Botahtaung (ဗိုလ်တထောင်) Dagon (ဒဂုံ) Dagon Myothit (East) (အရှေ့ဒဂုံ) Dagon Myothit (North) (မြောက်ဒဂုံ) Dagon Myothit (Seikkan) (ဒဂုံဆိပ်ကမ်း) Dagon Myothit (South) (တောင်ဒဂုံ) Dala (ဒလ) Dawbon (ဒေါပုံ) Hlaing (လှိုင်) Hlaingtharya (လှိုင်သာယာ) Hlegu (လှည်းကူး) Hmawbi (မှော်ဘီ) Htan Ta Pin (ထန်းတပင်) Insein (အင်းစိန်) Kamaryut (ကမာရွတ်) Kawt Hmu (ကော့မှူး) Kha Yan (ခရမ်း) Koko Kyun (ကိုကိုးကျွန်း) Kon Chan Kone (ကွမ်းခြံကုန်း) Kyauk Tan (ကျောက်တန်း) Kyauktada (ကျောက်တံတား) Kyeemyindaing (ကြည့်မြင်တိုင်) Lanmadaw (လမ်းမတော်) Latha (လသာ) Mayangone (မရမ်းကုန်း) Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ) Mingalartaungnyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်) North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ) Pabedan (ပန်းပဲတန်း) Pazundaung (ပုဇွန်တောင်) Sachaung (စမ်းချောင်း) Seik Kyi Kha Naung To (ဆိပ်ကြီးခနောင်တို) Seikkan (ဆိပ်ကမ်း) Shwepyithar (ရွေှပြည်သာ) South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ) Taik Gyi (တိုက်ကြီး) Tamwe (တာမွေ) Thaketa (သာကေတ) Than Lyin (သန်လျင်) Thingangyun (သင်္ကန်းကျွန်း) Thone Kwa (သုံးခွ) Twante (တွံတေး) Yankin (ရန်ကင်း)
I accept the Terms and Conditions of jobready365.
You can find employment for your dream job through our top job and work opportunity listings from top employers and vacant jobs for all positions.
+959 787 101 644
+959 777 006 773
NO.274, 1st Floor, U Aung Zayya Street - Mayangone Tsp, Yangon
Developed by Golden ICT Solutions Co.,Ltd